China Pueraria lobata wepu mmiri solue puerarin 10% ụlọ ọrụ na ndị na - eweta ya | Shaanxi Green Bio-Injinia
N'ebe a na-edozi ahụ, phytoestrogen utịp nke puerarin nwere ike ịkwụsị mgbaàmà kpatara site na mbenata ogo estrogen na ịka nká, dịka mastoptosis, crinkle, mbelata nke ike anụ ahụ na leukotrichia. N'ihi ya, a na-ejikarị ya na ude mmiri ara, anya ude na ude anụ ahụ.
1.Pueraria ji mee ka ọgụ na igbochi mkpụrụ ndụ kansa;
2.Pueraria nwere ojiji nke na-eche nche mmetụta na nephritis, nephropathy na gbasara akụrụ odida;
3.Pueraria ya na oru nke iwusi myocardial ukwu mkpi ike na ichebe myocardial cell;
4.Pueraria nwere oke nke ichebe nrụrụ nke erythrocyte, na-abawanye ọrụ nke usoro hematopoietic.
1. N'ebe nri, a pụrụ iji puraria isoflavones mee ihe na nri na ngwaahịa ahụike, belata ọbara mgbali na abụba ọbara.
2. N'ọgwụ ọgwụ, puraria isoflavones na-ejikarị eme ihe na biopharmaceuticals na API nke ndị na-ahụ maka usoro obi na China. Dịka ụdị ọgwụ injectio nke ndị China, puerarin bụ ọgwụ a na-ahụkarị maka ọrịa obi na ọrịa cerebrovascular.
3. Na mpaghara ịchọ mma, phytoestrogen utịp nke puerarin nwere ike ịkwụsị mgbaàmà kpatara site na mbelata nke estrogen na ịka nká, dị ka mastoptosis, crinkle, mbelata nke ike anụ ahụ na leukotrichia. N'ihi ya, a na-ejikarị ya na ude mmiri ara, anya ude na ude anụ ahụ.
4. Dị ka ọgwụ crud maka ọgwụ obi, a na-ejikarị ya na biopharmaceuticals;
5. Site na mmetụta pụrụ iche maka ịbelata lipid, a na-ejikarị ya tinye ya na nri na ngwaahịa ahụike;
6. Site na mmetụta phytoestrogen pụrụ iche, a na-ejikarị ya na mpaghara ịchọ mma iji gbochie ike.
Ọrụ nke Shilajit ntụ ntụ
1.Ọ na-achịkwa ma na-ejikwa ọkwa shuga shuga ma na-egosi ihe hypoglycemic.
Ọ na - eme ka okpukpu nke cell sel dịkwuo elu.
3.Ọ na - eme ka usoro nke protein na nucleic acid gbalite ngwa ngwa.
4.Ọ na - eme dị ka ihe egwu na - enweghị ihe ọ bụla ma weghachite mmebi nke ihe ndị na - egbu egbu.
5.Ọ na - enyere aka ibuga nri miri emi n’ime anụ ahụ.
6.Ọ weghachite nguzo nke electrochemical ma kwado sistemu nchekwa.
7.Ọ na - akwalite mmegharị nke mineral, ọkachasị calcium, site na magnesium n'ime anụ ahụ na ọkpụkpụ.
Nke gara aga: Wepụ Shilajit
Osote: Ikpe 99%